Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): မြန်မာနယ်နိမိတ်ထဲက လူမျိုးစုများ (အပိုင်း 1-2 )
at 12/12/2013 01:25:00 PM
The observations made here are the fruit of years of studying the Moken and their Moklen and Urak Lawoi cousins whose changes in lifestyle over time and remarkable cultural resilience we have witnessed. Three groups of Austronesian maritime nomads are spread out along the west coast of Thailand and Burma, forming the northern point of Austronesian migration. What do these observations consist of?
1. မွန်ဂိုလွိုက် Mongoloid
1.1. တရုတ်-တိဘက် Sino-Tibetan
1.1.1.1. ကိုးကန့် (မလိပါရင့်) (မန်ဒါရင်ဇာစ်မြစ်)
1.1.1.2 ပင်လယ်ရပ်ခြားတရုတ် (ဟုတ်ကျင့်-ဖူးကျင့်-လက်ရှည်၊ ကွမ်တုံ-လက်တို၊ ဟတ်ခါး၊ ယူနန်၊ ပန်းသေး ဇာစ်မြစ်များ)
1.1.2. တိဘက်-ဗမာ Tibeto-Burman
1.1.2.1. ကချင်နွယ် Jingpho-Konyak-Bodo (Kachinic)
1.1.2.1.1. ကချင် ဂျိန်းဖော (မရစ်၊ မရမ်၊ အင်ခွန်၊ လဖိုင်၊ လထော်) မဂေါင်၊ ဒူလင်း-ခခူ၊ ဂေါ်ရီ-ဂျဆင်း (လေပဲယာ၊ ငှခုပ်၊ ?လတိန်၊ ?လဘန်) [ထိန်နိုင်း၊ ဟူးကောင်း - ဒေသအမည်များ]
1.1.2.1.2. ထမန် (အင်ကျယ်၊ လွီ၊ ?မလင်)
1.1.2.1.3.1. ကတူး (သက်)
1.1.2.1.3.2. ကနန်း (?ပျူ) ထူးရင်၊ အမားသင်း၊ အပွားသင်း
1.1.2.1.4. သက် (ချက်)
1.1.2.1.5. ဒိုင်းနက် (ချက္ကမာ) (ဘင်္ဂါလီစကားပြော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်)
1.1.2.1.6.1. ခန္တီး-ထန်ဂန်-ထငံနာဂ (ရော်ထိုင်၊ လိုင်းနောင်၊ မကျန်း-မစန်၊ ဆော်လော်၊ ပုံညို၊ ဆပ္ပလော်၊ နောက်အော် -နောက်ကော်-နွတ်ကူဟိုင်း၊ ဓနူး-စေမျိုး၊ ဂိုဘန်၊ စလူ၊ ?ဝဲလောင်)၊ လဟယ် (နောက်ဆန်း-နောက်ကုန်း၊ အံ့ဘော်၊ ကတွန်း စံပြ၊ နောက်ညူမန်၊ နောက်ညူကံခမ်း၊ နောက်ညူကျထောက်၊ မွန်တုံးညူ၊ မွန်တုံးရှောက်)
1.1.2.1.6.2. ဟိုင်းမြေ-ဟဲမြေနာဂ (ကကျူး-ကန်ကျိုး၊ ကာဆန်း၊ ကနန်း၊ ကမန်း၊ ကချီး-ဂရှီး၊ ကျန်ကောက်၊ ကျန်ဖန်း၊ ကျက်ဆန်း၊ ကော့လွန်း-ကလွန်း-ကုတ်လွန်း၊ ပိန်းကူး၊ လန်ခင်း၊ လပ်ကီး၊ ငိုက်မောင်ဂံ၊ လာရှိန်း၊ ဝမ်လန်း၊ ဆန်ရီး၊ လီဆား-လဆား-မဆား၊ လားမား၊ လုံခယ်-လုံခိုင်၊ ရားရ၊ ရန်ရှိန်-ရန်စီ၊ ရမ်ခူး၊ ရိုရှ၊ ဝန်က၊ ရှမ်ဝမ်း၊ ရှတ်ဘို၊ ဝမ်ချုံး၊ တပေါ၊ ဂါချိမ်း၊ လန်ပန်း၊ ရန်ဆဲ၊ ရာဆား၊ ခလတ်၊ ရွပ်ရှိန်း၊ လပ်တဲ၊ လုံလီး၊ ထောင်လွမ်း၊ ဆန်းကြဲ-ဆန်ကျစ်၊ ဆုန်ဆိန်း၊ ဆန်ဝမ်း၊ မော်ရမ်း၊ ဟခီး၊ ဟာရှန်း-ဟစန်း၊ ဟာရှိတ်၊ မဲဆောင်း၊ မော်ရှမ်း၊ တောင်ဝဲ၊ ဒုံဟီး၊ မယ်တဲ-မိတဲ၊ ပေါ်တဲ၊ ကကျွန်း-ဂချမ်း၊ ရန်နော၊ ရှစ်ရှေ၊ ဝါကပ်၊ ရှမ်ကဲ၊ ရှမ်ကား၊ ရောင်ကွန်၊ ဝမ်းလမ်း-ဝေလန်း၊ ယာမီကိုး၊ ဟာလွမ်း၊ တောင်ကြဲ၊ ကော့ချုံး၊ ကဲဆနန်၊ နုတ်ပါ၊ လွမ်လူး၊ ကျွန်ကျင်း၊ ကြူရန်း၊ မီးကူး၊ ရှောက်ရမ်း၊ ရိန်ခူး) လစော်၊ ဆန်းတဲ၊ မဲမောင်၊ စိတ်ဝါး၊ ပုံဆိန်း၊ လောင်ဆောက်၊ လောင်ပနာ
1.1.2.2. ကရင်နွယ် Karenic
1.1.2.2.1. စကော ကရင် (ဖထိ)
1.1.2.2.2. ပိုး ကရင် (မိုးထိ)
1.1.2.2.2.1. ပဒဲ့-ဖလုံ (အရှေ့ပိုး)
1.1.2.2.2.2. အနောက်ပိုး (ဘောကလော်)
1.1.2.2.2.4. ထိုကီ-ဖလုံ (ဘိတ်-ထားဝယ်ဒေသ)
1.1.2.2.2.5 ယယ်စဂေါ်၊ မယ်ငေါ-လေးခို (ထိုင်းနိုင်ငံ)
1.1.2.2.2.6. ပအိုဝ့် ၁။ ကွန်လုံ၊ ၂။ ခရိုင်း၊ ၃။ တတောက် (နန်းခေ၊ ကျန်းစန်း၊ တရာ့က်၊ တနိုး၊ တတိုင်၊ တထွေး၊ ထီရီး၊ ရင်းသိုင်း၊ ပန်းပလှိုင်၊ ကွန်ကျမ်း၊ ပန်နင်၊ ပထုံ-ဗလာ၊ တိယန်-တယင်၊ မိုက်ကွန်၊ ယင်းဒမ်၊ ဝါးဖရဲ၊ တောင်သား၊ မိုက်လန်၊ ပနဲ၊ တကွာ-ကောင်တန်၊ ကွန်စံ၊ လွယ်အိုင်း၊ ငသောက်ရင်း)
1.1.2.2.3. ဘွဲကရင် (ကရင်ဖြူ၊ ပလေကီး၊ ?ဆော်ခို၊ ?စိစိ၊ ?ယပီ-ဘွဲဖြူ)
1.1.2.2.3.2. ကယား (ကရင်နီ)
1.1.2.2.3.2.1. ကယား (လာကျား၊ ?ပနယ်)
1.1.2.2.3.2.3. ယင်းတလဲ (ကြက်တူရွေး)
1.1.2.2.3.2.4. ကယော (ဟာဆူ၊ ထီဘူးခီ၊ ဗရဲ့၊ ဆိုခူ၊ ဂါလို၊ ပကူး၊ ဂဒို၊ လာခို)
1.1.2.2.3.3.1. လဝီ-ကခေါင် (ပဒေါင်)
1.1.2.2.3.3.2. ကဒေါ့ (ဂေခို)
1.1.2.2.3.3.3. ကငန် (ယင်းဘော်)
1.1.2.2.3.3.4. လထ (ဇယိမ်း) (လယ်မယ်-ဘွဲမဲ၊ စရင်း-စရေး၊ တိယန်)
1.1.2.3.1. ကူကီး (ခေါင်ဆိုင်) ကူကီး (အိန္ဒိယ၊ ဟုမ္မလင်း-ခန္တီး)/သာဒိုး (ဗမာပြည်) Doungel, Sitlhou, Singsit, Kipgen, Haokip, Chongloi, Hangshing, Touthang, Lotjem, Haolai, Tuboi, Sa’um, Khuolhou, Lupho, Pupheng, Misao, Mate, Lhungdim, Ngailut, Kiloung, Insun, Jongbe, Lunkim, Lienthang, Thangngew, Ghansan, Lhang’um, Khuongthang
1.1.2.3.2. ဇိုမီး-တီးဒိမ် ခေါနိုး၊ ဂန်တဲ့၊ ဂွေးတဲ၊ ငွန်း၊ ဆီစာန် (စိယင်)၊ ဇို၊ တီးတိန်၊ တေဇန်၊ ဒင်မ်၊ ပိုက်တဲ၊ ဗိုင်းဖေ၊ ဆိမ်းတဲ၊ စိုင်းဇန်၊ ငင်းတဲ၊
1.1.2.3.3. လိုင်မီး-ဖလမ်း-ဟားခါး ခွာဆင်းမ်၊ ဆင်တန်၊ ဇာဟောင်၊ ဇိုဖေ၊ ဇန်ညှပ်၊ တပေါင်၊ တိုင်ချွန်း၊ တောရ်၊ မိအဲလ်၊ လင်တဲ၊ လိုင်၊ ခေါင်လီ၊ ငွန်း၊ ဇုတ်ဟွ၊ ဘွမ်ဇို၊ ပါဝီ၊ မနိ၊ ထန်ဒန်
1.1.2.3.4. မရာ-မတူပီ (?ပျူ) မီရမ်၊ မတူ၊ ဇိုတုံး၊ လောက်တူ
1.1.2.3.5. ရှို-မြေပြန့် (ဆလိုင်းချင်း)
1.1.2.3.5.1. အရှို၊ (နန်းခ၊ ခိုင်ဇို၊ ပန်ဆိုင်ဇို၊ ဆူလေဇို၊ ပန်၊ လန်ဇို)၊ ဆတ်တု
1.1.2.3.6. ချို-မင်းတပ်-ကန်ပက်လက် (?ပျူ) ဒိုင် (ယင်ဒူး)၊ မကန်း၊ မွင်း (ချင်းဘုတ်)၊ အူးပူ၊ ရောင်တူ (ချင်းပုန်း)၊ (?တုန်ချင်း)၊ မတူးမွမ် (မင်း)၊ ဇောင်းတူ၊ ငမင်း၊ လီမရို၊ ယစ်ပီ၊ ငလင်း၊ လွန်းတူ၊ မန်းသန်၊ နိတူ၊ စင်းဒွေး၊ တောင်သား?၊
1.1.2.3.7. မီဇို ကလင်ကော၊ လူရှိုင်း (လူရှေ)၊ ဟွာလ်ငို၊ ဖန်နိုင်၊ ခေါလ်၊ ရင်း၊ ရောလ်တဲ၊ ချောတဲ၊ ခီယန်းတဲ၊ ငင်းတဲ၊ မှာ၊ ထလောင်၊ ဗန်ချတေ၊ ရင်းသလေ၊
1.1.2.3.8. ခမီ(မရို)-ပလက်ဝ (?ပျူ) ခမီ၊ မြို၊ အဝခမီ၊ ခေါင်စို၊ ပနမ်း (ချို)၊ လေးမြို၊ ဝါကင်းမ်၊ အနူး၊ ?လင်းကဲ၊ ?ရှန်ဦး-ရှန်းဒူး၊ ?ခုံ၊ ခူမီ၊ မရှို၊ ပန်စူ၊
1.1.2.3.9. နာဂ (ဆွမ္မရာ ၄၊ ထငံ ၁ဝ၊ ဟဲစန်း ၃၊ ဟဲမြေ ၄၉ = ၆၄ သို့မဟုတ် ၈၆) ဟိန်ကွတ်၊ အမိမိ
1.1.2.3.9.1. လေရှီး-ဆွမ္မရာနာဂ (တန်ခူး/တန်ကွန်၊ ရှယ်ရာ (ပါဂျန်)-မကော်ရီနာ၊ ပါရာ၊ ?ခေါင်ဆယ်)
1.1.2.3.9.2. ဟဲစန်းနာဂ (စန်း၊ ဝေ၊ ကာယော-ကိုင်းယော်)
1.1.2.4.1. ကချင် ရဝမ် ခနုံ [ဒရု၊ လွန်မီ၊ မတ်ဝမ်၊ ဒန်ဆာရ် —စကားကြီး ၄ မျိုး] (ထလု၊ ထရုံ၊ ဇယ်ဝမ်၊ အခူးဖိုင်၊ အနမ်းဖိုင်၊ တမန်၊ ရမွန် (ရမီလ်)၊ လွန်မီ၊ တောင်ဖ၊ ဒလောင် —စကားငယ်များ)
1.1.2.5. လိုလို-ဗမာ Lolo-Burmese (ပျူ-?တောင်သား)
1.1.2.5.1. ဗမာနွယ် Burmish
1.1.2.5.1.1. မြောက်ပိုင်းဗမာနွယ် (ရှေးဦးဗမာ)
1.1.2.5.1.1.1. ကချင် မရူ လောင်ဝေါ် (ဘာရှေး၊ လောင်ဆူ-ရူမော၊ ဇောင်းဘုတ်-ဇော်ဇက်၊ လကိန်၊ ဂရင်နော —စကားကြီး)
1.1.2.5.1.1.2. ကချင် အဇီး (ဇိုင်ဝါး) (Tumhpao, Hpukawn, Myishi,Mahkaw, Sumwa, Dashi, Shumlut, Numdaw, Chinghkang, Sahkung)
1.1.2.5.1.1.3. ကချင် လရှီ (လချိတ်၊ ငေါ့ချမ်း၊ Manshang,Hapare, Luksing, Galao or Yindam, Mading or Ngawlang, Lagw, Si-chang, Lehyawn, Htam-nyo)
1.1.2.5.1.1.4. ဖွန်း (တိုင်းဖွန်း)
1.1.2.5.1.1.5. မိုင်းသာ (အချန်) ရှမ်းတရုတ် (တူးရင့်)
1.1.2.5.1.2.1.1. Yaw (တောင်သား ?Pyu)
1.1.2.5.1.2.2. ရခိုင် (ရမ်းဗြဲ၊ အနောက်သား)
1.1.2.5.1.2.2.1. ချောင်းသား (?ဘုရင့်နောင်အနွယ်)၊ တောင်သား
1.1.2.5.1.2.3. မာရမာကြီး-ဘရူးဝါး (?ဘုရင့်နောင်အနွယ်)
1.1.2.5.1.2.7.1. ဘိတ်သား (ဘီလွတ်၊ မဲအို)
1.1.2.5.1.2.8. ယဗိန်း (?ဇမိန်း)
1.1.2.5.2. လိုလိုနွယ် Loloish
1.1.2.5.2.1.1. ကချင် လီဆူး
1.1.2.5.2.1.1.1. လီဆူး-ယောယင် (Town Kya, Ngwa Hpa, Zaw Kya,Gu Hpa, Lair maair, Bya Hpa, Dzi Hpa, La Hpa, Waw Hpa, Waw Hpur)
1.1.2.5.2.2.1. အခါ ကော်၊ ဖျင်၊ အခေ-အခို၊ ?မြွေ၊ Pu Li, Tao Sa Mi, Na Li
1.1.2.5.2.2.2. လားဟူ (မူဆိုး) လားဟူနက် (လားဟူကြီး)၊ လားဟူရှီ (လားဟူနီ၊ လားဟူဝါ၊ မူနေး၊ ကွီ)၊ [လားဟူရှိလဲ၊ လားဟူဗလား၊ လားဟူအဂါး (?ကျောက်စီ) ?မြွေ]
1.1.2.6. ဟိမဝန္တာနွယ် Himalayish
1.1.2.7.1. ကသည်း (မေ့သေး-မဏိပူ)
1.2. တိုင်း(ရှမ်း)-ခတိုင်း Tai-Kadai
1.2.1. ခမ်း-တိုင်း(ရှမ်း) Kam-Tai
1.2.1.1. ရှမ်း (တိုင်းယိုင်-ရှမ်းကြီး၊ တိုင်းမော-မောရှမ်း၊ တိုင်းနူ-ခေးတိုင်းနူ-ရှမ်းတရုတ်၊ တိုင်းခွန်-ဂုံရှမ်း၊ တိုင်းခမ်းတီး-ခမ်းတီးရှမ်း-တိုင်းအွန်၊ တိုင်းလျံ-ရှမ်းနီ၊ ဒရယ်၊ တိုင်းလု-တိုင်းလိ-စစ်ဆောင်ပနားရှမ်း၊ တိုင်းလမ်-မုံးလမ်ရှမ်း)
1.2.1.2. ထိုင်း (တိုင်းနွဲ့-ရှမ်းကလေး)
1.2.1.3. ယွန်း (လန်နားရှမ်း-မြောက်ပိုင်းထိုင်း)
1.3. သြစတြိုအေးရှားတစ် Austro-Asiatic
1.3.1.1. မွန်နွယ် Monic
1.3.1.1.1. မွန် မွန်သိ၊ မွန်ညန်၊ မွန်တာ၊ မွန်နန်၊ (?ရခိုင်ချောင်းသား)
1.3.1.2.1. ခမူနွယ် Khamuic
1.3.1.2.1.1. ခမူ-ခမင် (လော-မြန်မာနယ်စပ်)
1.3.1.2.2. ပလောင်နွယ် Palaungic
1.3.1.2.2.1.1. ပလောင် (တအာင်း) ကတူး၊ ကွယ်ဟယ်၊ ငွံန်ရောသ်၊ တောင်မ၊ ရူကျိုင်း၊ ရူကွမ်း၊ ရူခါန်၊ ရူမိုင်း၊ ရူပိုး၊ ပန်နိမ်၊ ရူဟော့၊ ရူမာဝ်၊ ရူလိုန်၊ ရူဘြာန်း၊ ရူခုတ်၊ ရူနော့၊ ရူလဲင်း၊ ရူတြာ၊ ရူဗရောင်း
1.3.1.2.2.1.2.1. ယင်းဆက်-ယင်းဝန်ခွန် (ယင်းရွိုင်-ယင်းကုန်း) ယင်းကျား (ဆက်)
1.3.1.2.2.2.1. ဝ လ၊ အင်၊ စုံ၊ ဇိုင်းရန်း၊ လင်း၊ ပွေး၊ ဖိလုတ် (ဖတင်း)၊ မပန်း၊ ဝဖာ (ဝှလင်းန်)၊ ?ဖျင်ဟ၊ တိုင်းလွယ် (ဆံတောက်)
1.4. သြစတြိုနီးရှန်း Austronesian
1.4.1. မလေး-ပေါ်လီနီးရှန်း Malayo-Polynesian
1.4.1.1. မလေးနွယ် Malayic
1.4.1.1.1. မော်ကလင်း Moklen
1.4.1.1.1.1. မော်ကင်း (ဆလုံ)
1.4.1.1.2. မလေးသား Malayan
1.5. မှုန်-မြောင် Hmong-Mien
1.5.1. မြောင် မြောင်ဇီး၊ ယောင်၊ အိုက်ဆွယ်၊ မြောက်၊ မြင်၊ မြှော့
2. ကော့ကေးဆွိုက် Caucasoid
2.1. အင်ဒို-ဥရောပ Indo-European
2.1.1. အင်ဒို-အာရိယန် Indo-Aryan
2.1.1.1. ဟိန္ဒူကုလား (တမီးလ်၊ ဂူဂျာရတ်တီ၊ ဂေါ်ရင်ဂျီ၊ ပန်ချာပီ၊ မာရာဝါရီ၊ တေလဂူ)
2.1.1.2. ဗမာမူဆလင် (ဗမာစကားပြော) မြေဒူး၊ ဇေရဘာဒီ၊ မဂို၊ ပသီ
2.1.1.3. ကမန် (ရခိုင်စကားပြော မူဆလင်) (တူရကီ၊ ပထန်၊ အာဖဂန်၊ မဂို၊ ကက်ရ်ှမီးယား ဇာစ်မြစ်)
2.1.1.4. ဘင်္ဂါလီ-အာသံ Bengali-Assmese
2.1.1.4.2. စစ်တကောင်းသား (ရိုဟင်ဂျာ) (ဘင်္ဂါလီစကားပြော မူဆလင်)
မန်မာနယ်နိမိတ်ထဲက လူမျိုးစုများ (အပိုင်း ၂)
Posted by Phoe Cho on December 11, 20130 Comment
ကမ္ဘာမှာ မွန်ဂိုလွိုက်၊ ကော့ကေးဆွိုက်၊ နီဂရွိုက် ဆိုတဲ့ မူရင်းလူမျိုးရင်းကြီး ၃ ခုရှိတဲ့အနက် ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ ပထဝီအပိုင်းအခြားတခုထဲမှာ မူရင်းလူမျိုးရင်းကြီးနှစ်ခုက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ လူမျိုးစုတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို အရင်ဦးဆုံးရောက်ရှိနေထိုင်ခဲ့တဲ့ နီးဂရွိုက်ကပ္ပလီမျိုးတွေကို နောက်မှဝင်လာတဲ့ မွန်ဂိုလွိုက်မျိုးတွေက မောင်းထုတ်လိုက်လို့ ကပ္ပလီကျွန်းတွေနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းဆွယ်အစွန်အဖျားကျွန်းတွေဆီ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိနေထိုင်သူအများစုဟာ အရှေ့တိုင်းအာရှလူမျိုးများလို့ခေါ်တဲ့ မွန်ဂိုလွိုက်အနွယ်တွေ ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက် အိမ်နီးချင်းအိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှာတော့ ကော့ကေးဆွိုက်အနွယ်တွေ အဓိကပျံ့နှံ့နေထိုင်တဲ့အတွက် သဘာဝကျစွာဘဲ နယ်နိမိတ်ချင်းကပ်လျက်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ထဲကိုလည်း ကူးဝင်လာကြတာရှိသလို အာသံ၊ မဏိပူရ၊ နီပေါ၊ တိဘက်၊ တရုတ်၊ လော၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားတို့နဲ့ အပြန်အလှန်ပျံ့နှံ့ ကူးယှက်နေထိုင်ကြတဲ့ မွန်ဂိုလွိုက်လူမျိုး တွေလည်း တော်တော်များများရှိနေကြပါတယ်။
မွန်ဂိုလွိုက်လူမျိုးရင်းထဲက ပင်မမျိုးကွဲ ၅ မျိုးကို ဗမာပြည်ထဲမှာ တွေ့ပါတယ်။
(၁) တရုတ်-တိဘက်ထဲက တိဘက်-ဗမာလူမျိုးကြီး နဲ့ တရုတ်လူမျိုးကြီး
(၂) တိုင်း(ရှမ်း)-ခတိုင်းထဲက ကမ်း-တိုင်းလူမျိုးကြီး
(၃) သြစတြိုအေးရှားတစ်ထဲက မွန်-ခမာလူမျိုးကြီး
(၄) သြစတြိုနီးရှန်းထဲက မလေး-ပေါ်လီနီးရှန်းလူမျိုးကြီး
(၅) မြှော့-မြောင် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကော့ကေးဆွိုက်လူမျိုးရင်းထဲက ဗမာပြည်ထဲတွေ့တဲ့ ပင်မမျိုးကွဲကတော့ အင်ဒို-ဥရောပမျိုးကွဲတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနယ်နိမိတ်ထဲမှာ တိဘက်-ဗမာလူမျိုးကြီးကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ လူမျိုးစုတွေကတော့ …
(၁) ကချင်- ဒီထဲမှာ ဂျိန်းဖော (မရစ်၊ မရမ်၊ အင်ခွန်၊ လဖိုင်၊ လထော်၊ မဂေါင်၊ ဒူလင်း-ခခူ၊ ဂေါ်ရီ-ဂျဆင်း၊ လေပဲယာ၊ ငှခုပ်၊ ?လတိန်၊ ?လဘန်)၊ ရဝမ် (ဒရု၊ လွန်မီ၊ မတ်ဝမ်၊ ထလု၊ ထရုံ စသည်များ)၊ မရူ-လောင်ဝေါ်၊ အဇီး-ဇိုင်ဝါး၊ လရှီ-လချိတ်၊ လီဆူး-လီရှောမျိုးနွယ်ကြီးတို့ပါဝင်။
(၄) နာဂ- ဒီထဲမှာ ထငံ၊ ဟိုင်းမြေ၊ ဆွမ္မရာ၊ ဟဲစန်း တို့ပါဝင်။
(၅) ကရင်- ဒီထဲမှာ စကော (ပကူး၊ မိုးနေပွား၊ တာလေပွား၊ ဝေဝေါ်)၊ ပိုး (ဖလုံ၊ အနောက်ပိုး၊ မွန်းပွား၊ ထိုကီ)၊ ဘွဲ (ပလေကီး၊ ဂေဘား)မျိုးနွယ်ကြီးတို့ပါဝင်။
(၇) ကယား- ဒီထဲမှာ မနူးမနော၊ ယင်းတလဲ၊ ကယောမျိုးနွယ်ကြီးတို့ပါဝင်။
(၈) ကယန်း- ဒီထဲမှာ လဝီ၊ ဂေခို၊ ယင်းဘော်၊ လထ မျိုးနွယ်တို့ပါဝင်။
(၉) ချင်း- ဒီထဲမှာ ကူကီး၊ ဇိုမီး၊ လိုင်မီး၊ မရာ၊ ရှို၊ ချို၊ မီဇို၊ ခမီး(မရို)မျိုးနွယ်ကြီးတို့ပါဝင်။
(၁၂) ဗမာ- ဒီထဲမှာ ယော၊ ယဗိန်းတို့ပါဝင်။
(၁၃) ရခိုင်- ဒီထဲမှာ တောင်သား၊ ချောင်းသား၊ ရမ်းဗြဲ တို့ပါဝင်။
(၁၅) ဒိုင်းနက် ခေါ် ချက္ကမာ (ဘင်္ဂါလီစကားပြော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်)
(၂၀) ထားဝယ် (ဘိတ်သား)
(၂၂) လားဟူ တို့ ဖြစ်ပြီး၊
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ၊ ပြည်နယ်တွေရဲ့ ပင်မတိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ (၂၃) တိဘက်၊ (၂၄) လင်ဘူး၊ (၂၅) ဂေါ်ရခါး၊ (၂၆) ကသည်းလူမျိုးတွေလည်း အနောက်မြောက်နယ်စပ်ဒေသ ဗမာပြည်ဘက်ခြမ်းထိ ရှေး ယခင်ကတည်းက ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြပါတယ်။ နယ်စပ်တလျှောက်နေထိုင်တဲ့ ကချင်၊ နာဂ၊ ချင်း၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ သက်၊ မရမာကြီး၊ ထားဝယ်၊ အခါ၊ လားဟူလူမျိုးတွေဟာလည်း တဖက်နိုင်ငံတွေအထဲထိ ပျံ့နှံ့နေထိုင် ကြပါတယ်။ ဓနု၊ အင်းသား၊ ထားဝယ်၊ တောင်ရိုး တို့ကို မူလက ဗမာလူမျိုးရဲ့ စကားကွဲတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့ အခုအခါ သီးသန့်လူမျိုးတွေအဖြစ် ရပ်တည်နေကြပါတယ်။
တရုတ်လူမျိုးကြီးထဲက မြောက်ပိုင်းသားမန်ဒါရင်တရုတ်လူမျိုးတချို့ဟာ ၁၆၆၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ မန်ချူးလူမျိုးစုတွေက တိုက်ထုတ်လိုက်လို့ မင်မင်းဆက်နောက်ဆုံးဘုရင် ယုံလီနဲ့အတူ ဗမာပြည်ထဲ တိမ်းရှောင်ခိုလှုံလာပြီးနောက် ဗမာ ဘုရင်နဲ့ သိန္နီစော်ဘွားညှိပြီး နယ်မြေသတ်သတ်မှတ်မှတ်ချပေးလိုက်လို့ (၂၇) ကိုးကန့်လူမျိုး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တခြားတရုတ်မျိုးနွယ်တွေဖြစ်တဲ့ ဖူးကျင့်၊ ဟတ်ကား၊ ကွမ်တုံ၊ ယူနန်၊ ပန်းသေးမျိုးနွယ်တွေကတော့ ကုန်းလမ်း၊ ပင်လယ်လမ်းတွေက ဝင်လာခဲ့ကြပြီး ပြည်တွင်းနေရာအနှံ့မှာ (၂၈) ပင်လယ်ရပ်ခြားတရုတ်လူမျိုးတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
(တိုင်း-ခတိုင်း) ခမ်း-တိုင်း(ရှမ်း)လူမျိုးကြီးထဲက ဆင်းသက်လာပြီး ဗမာပြည်နယ်နိမိတ်ထဲ နေထိုင်နေကြတဲ့-
၉၂၉) ရှမ်း- (တိုင်းယိုင်-ရှမ်းကြီး၊ တိုင်းမော-မောရှမ်း၊ တိုင်းနူ-ခေးတိုင်းနူ-ရှမ်းတရုတ်၊ တိုင်းခွန်-ဂုံရှမ်း၊ တိုင်းခမ်းတီး-ခမ်းတီးရှမ်း-တိုင်းအွန်၊ တိုင်းလျံ-ရှမ်းနီ၊ ဒရယ်၊ တိုင်းလု-တိုင်းလိ-စစ်ဆောင်ပနားရှမ်း၊ တိုင်းလမ်-မုံးလမ်ရှမ်း)
လူမျိုးဟာ နယ်ချင်းစပ်နေတဲ့ တဖက်နိုင်ငံတွေကိုလည်း ပျံ့နှံ့နေသလို တဖက်နိုင်ငံတွေက ပင်မတိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်တဲ့ ထိုင်း (တိုင်းနွဲ့-ရှမ်းကလေး)၊ ယွန်းရှမ်း (လန်နားထိုင်း)၊ လောရှမ်းလူမျိုးတွေလည်း ဗမာပြည်ဖက် နယ်စပ်ကျော် ပျံ့နှံ့နေထိုင်ရင်း ရှမ်းလူမျိုးအဖြစ်ဘဲ ခံယူခဲ့တာ ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ တိဘက်-ဗမာလူမျိုးကြီးကဆင်းသက်တဲ့ ကတူး-ကနန်း၊ ထမန်၊ ဖွန်း နဲ့ မိုင်းသာတို့ဟာလည်း ရှမ်းလူမျိုးအဖြစ် ခံယူနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိနေပါတယ်။
(သြစတြိုအေးရှားတစ်) မွန်-ခမာလူမျိုးကြီးထဲက ဆင်းသက်လာတာက …
(၃၃) ယင်း (ယင်းနက်၊ ယင်းကျား၊ ဆက်)
တို့ ဖြစ်ပြီး ယင်း နဲ့ ဓနော ကလွဲလို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်း ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြပါတယ်။
(သြစတြိုနီးရှန်း) မလေး-ပေါ်လီနီးရှန်းလူမျိုးကြီးက ပေါက်ဖွားလာပြီး ဗမာပြည်ထဲနေတာက …
(၃၆) မော်ကင်း(ဆလုံ) ဖြစ်ပြီး အိမ်နီးချင်း ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလိပိုင်နိုင်ငံတွေထိ ပျံ့နှံ့နေသလို မလေးရှား နိုင်ငံရဲ့ ပင်မလူမျိုးဖြစ်တဲ့ (၃၇) မလေး (ပသျှူး) လူမျိုးတွေလည်း မြန်မာနယ်နိမိတ်ထဲ ပျံ့နံှ့နေထိုင်တာ နှစ်ပေါင်းရာချီ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
(မြှော့-မြောင်) လူမျိုးကြီးထဲက ဆင်းသက်လာတဲ့-
(၃၈) မြောင် (မြောင်ဇီး၊ ယောင်၊ အိုက်ဆွယ်၊ မြောက်၊ မြင်၊ မြှော့)
ဟာလည်း မြန်မာပြည်တွင်မက အိမ်နီးချင်း တရုတ်၊ လော၊ ထိုင်းတို့မှာလည်း ပျံ့နှံ့ရှိနေပါတယ်။
အင်ဒို-ဥရောပလူမျိုးကြီးကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ အင်ဒို-အာရိယန် နဲ့ ဘင်ဂါလီ-အာသံ စကားပြောလူမျိုးတွေကိုလည်း လက်ရှိဗမာပြည်ဧရိယာထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။
တရုတ်ဘုရင်ယုံလီနဲ့ တချိန်တည်းလောက်မှာဘဲ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက် အိန္ဒိယနိုင်ငံက မဂိုဘုရင် ရှာရှုဂျာလည်း ရခိုင်ပြည်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့ရာက သူ့နောက်လိုက်လေးသည်တော်တွေဟာ (၃၉) ကမန်လူမျိုးတွေ ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်။ ကိုးကန့်တွေလို နယ်မြေသတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိဘဲ ရခိုင်တွေနဲ့ ရောနှောနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် မူလ အင်ဒို-အာရိယန်ဘာသာစကားတွေ မေ့ပျောက်သွားပြီး ရခိုင်ဘာသာစကားကိုဘဲ မိခင်ဘာသာအဖြစ် လုံးဝခံယူသုံးစွဲလာကြ ပါတယ်။
(၄၀) ဟိန္ဒူကုလား (တမီးလ်-ကလယ်၊ ဂူဂျရာတီ၊ ဂေါ်ရင်ဂျီ၊ ပန်ချာပီ၊ မာရဝါရီ၊ တေလဂူ)
(၄၁) ဗမာမူဆလင် (မြေဒူး၊ ဇေရဘာဒီ၊ ပသီ၊ မဂို) ဖြစ်ပြီး ညောင်ရမ်းခေတ်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်နဲ့ ကိုလိုနီခေတ် ကတည်းက ဝင်ရောက်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄၄) စစ်တကောင်းသား (ရိုဟင်ဂျာ)
တို့ဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလားနယ်နဲ့ နယ်ချင်းစပ်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်ထဲကို ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြပါတယ်။
လူမျိုးစုတစုစီမှာ မျိုးနွယ်စု၊ ဆွေမျိုးစုတွေ အများကြီးထပ်ခွဲထားတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူမျိုးအားဖြင့် တမျိုးတည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးစုအသစ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတာ ရှိသလို လူမျိုးစုဟောင်းတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတာလည်း မဆန်းပါ။ လူမျိုးသတ်မှတ်ဖို့အတွက် စကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ နယ်မြေအနေအထား၊ သမိုင်းနောက်ခံ၊ စိတ်နေ သဘောထားတို့ကို အခြေခံရတာ နိုင်ငံတကာထုံးစံ၊ မနုဿဗေဒထုံးစံ၊ ဘာသာဗေဒထုံးစံဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ DNA နဲ့ စစ်ဆေးသတ်မှတ်တာတွေလည်း ရှိနေပါပြီ။
ဒါကြောင့် ဗမာပြည်ဧရိယာထဲနေထိုင်နေကြတဲ့ လူမျိုးတွေဟာ (မျက်နှာဖြူအနောက်နိုင်ငံသားတွေမပါ) အများဆုံး လူမျိုး ၄၄ မျိုးဘဲရှိပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ပင်မတိုင်းရင်းသားတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ရင် ဌာနေတိုင်းရင်းသားလို့ ပြောနိုင်တာက ၃၃ မျိုးဘဲရှိပါတယ်။ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်းတို့လို တခြားလူမျိုးတွေကလည်း တစုတစည်းတည်း လူမျိုးတမျိုးတည်းအဖြစ် ခံယူကြရင် တိုင်းရင်းသားအရေအတွက် ၃၀ အောက် ထပ်လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။
Photo by : http://www.reseau-asie.com/article-en/globalisation-ethnocide-ferrari-ivanoff/